Kedu ihe mere ndị Naịjirịa agaghị nzụkọ mgbere n'Amerịka? - BBC News Ìgbò
Kedu ihe mere ndị Naịjirịa agaghị nzụkọ mgbere n'Amerịka?
Image copyright Yemi Osibanjo/Twitter
Nkenke aha onyonyo Yemi Osibanjo so na ndị aha dị n'akwụkwọ eji hazie ha bụ nzụkọ
Ọtụtụ ndị na-anọchịte anya gọọmentị Naịjirịa atụrụanya na ha nọ n'ọgbakọ ụlọọrụ na-ahụ maka Naịjirịa na mba Amerịka haziri n'obodo Washington DC egosịghị ihu na ya bu emume.
Ọbịbịa ndị gọọmentị ahụ abịaghị mere ka ndị mmadụ na-enwe ịtụnanya na Naịjirịa agaghị enweta ntunye ego site na mba ofesi.
Ndị kwesiri ịga ebe ahu gunyere osote onyeisiala bụ Yemi Osinbajo, mịnịsta na-ahụ maka ego bụ Kemi Adeosun, mịnịsta nke mmanụ agbịdị bụ Ibe Kwachukwu, mịnịsta nke ọrụugbo bu Audu Ogbeh, mịnịsta nke tecknụzụ bụ Ogbonnaya Onu, mịnịsta mgbasaozi bụ Lai Mohammed, mịnịsta nke okwute ndị bara uru bụ Kayode Fayemi na mịnịsta nke mgbere bụ Okechukwu Enelamah.
Ụtụ anwụrụ na mmanya etinyela ego
Switzerland ekwetala iweghachite ego Abacha buuru
Otu onye ihe a ndị gọọmentị mere na-ewute bụ Eze ndị Kano Sanusi Lamido, bụ onye rụbụrụ ọrụ ka onye nhazi ụlọakụ ukwu na Naịjirịa.
Ihe Sanusi kwuru
Sanụsi kwuru na onye na-akwado itinye ego n'Afịrịka, "o nwere Naijirịa, onwere Gana, o nwere Rụwanda, Kenya na Sawụt Afịrịka".
Ọ gakwara n'ihu kwuo, "Naịjirịa nwere ike karịa ndi ọzọ niile n'ịtụ mgbere, mana o nwere ike sị kama ya ga etinye dọla 500 na Naịjirịa, ka m tinye dọla 100 na Ghana, dọla 100 na Rụwanda, dọla 100 na Code Vuwa, ka o nweta nrite mgbasa aka."
"Anyị gara ka anyị na ndị nwere ego ha na-etinye na mba mee nzụkọ, anyị kwesiri ibido na elekere itoolu, anyị wee bido na elekere iri. Mgbe m ruru ebe ahụ, ha kpọrọ m ga n'ụlọọrọ onye na-anọchịte anya Naịjirịa. Ndị bịara nzụkọ ahụ nọ ebe ahụ, osote onyeisiala anọghị, ndị mịnịsta anọghị," Sanusi kwuru.
Sanusi sị na ihe a mere adịghị mma, maka na ọ na-egosi na Naịjirịa adịbeghi nkwadobe maka ihe a na-ekwu okwu ya.
O kwuru, "Unu kpọrọ ndị mmadụ ka ha bịa nụrụ etu e si atụ mgbere na Naịjirịa, mana unu abịaghị. Ọbụghi etu a ka esi enwete ndị ga-etinye ego na Naịjirịa. Ya bụrụ na ọ bụ ndị Rụwanda haziri ọgbakọ a, onyeisiala ha bu Kagame ga-anọ ebe ahụ na-agwa ndi mmadụ bịawa Rụwanda.
Ndị mmadụ tinyekwere ọnụ n'okwu a na soshal midia.
Onye nwere akara @SegunAndrews kwenyere n'ihe Sanusi kwuru.
Skip Twitter post by @SegunAndrews
Several Nigerian Ministers and Governors had traveled for over 20 hours to meet with investors in the U.S last week, but "they did not turn up at the function with such high caliber of investors seated" says Sunday Michael Ogwu, @daily_trust's Financial Journalist. pic.twitter.com/VTc0cpS1y1
— SEGUN (@SegunAndrews) 22 Eprel 2018
End of Twitter post by @SegunAndrews
Mana, gọọmentị ekwuola na ọbụghị etu a ka ha bụ ihe siri ga.
Laị Mohammed bụ mịnịsta na-ahụ maka mgbasaozi zipuru ozi na-akọwa na ọ bụghị eziokwu na ndị kwesịrị ịga ya bụ nzụkọ agaghị.
Mohammed na-akọwa na ndị mịnịsta aha ha dị n'emume a enwetaghị akwụkwọ e ji si ha bịa ya, maọbụ nọdụ na Washịntịn DC mgbe ọgbakọ a na-eme.
O kwuru na mịnịsta ọrụugbo, nke ọkụ latrik na ọrụ na nke okike ego na-ahazi enwetaghi akwụkwọ agbanyeghị na aha ha dị n'akwụkwọ ndị ga-ekwu okwu na ya bụ ọgbako.
Mịnịsta nke mgbere na onwe ya so onyeisiala gawa nzụkọ ndị na-achị mba ndị so na Commonwealth bi na London.
Mịnịsta na-ahu maka ego nọ na Washịntịn DC, mana ọ bụ maka nzụkọ ndị ụlọakụ ụwa na IMF.
Ọ gakwara n'ihu kwuo na mịnịsta na-ahu maka mgbasa ozi na omenala nwetere akwukwọ, mana ọ zara ya were gwa ndị na-ahazi ọgbako a na ya agaghị aganwu maka ihe ndị ọzọ aka ya di na ya.
Lai Mohammed kwuru na "Ihe ndị a gosiri na e kwesịghị ikwu na ndị Minista ekweghi ịga ya bu nzụkọ.
Akụkọ kachasị n'abalị a: Salah ọ ga-aga iko mbaụwa?